Wafdi uu hogaaminayay Wasiirka Caafimaadka PL oo maanta kormeeray xaafadaha ay wali biyaha roobka dhex fadhiyaan. – Radio Daljir
Oktoobar 22, 2012 9:27 b 0
Gaalkacyo, Oct 22- Tan iyo markii dhawaan magaalada Gaalkacyo ay ka da’een roobkii dayrta waxaa ay biyo badan dhigeen xaafadaha kala duwan ee Magaalada taasoo hakad galisay habsami u socodka waxbarashada iyo ganacsiga.
Biyahaas magaalada dhex fadhiya oo midab doorsoomay ayaa laga cabsi qabaa inay ka dhashaan xanuuno saamayn ku yeesha bulshada.
Maanta ayaa wafdi uu hogaaminayay wasiirka Caafimaadka Puntland Dr Cali C/laahi Warsame oo qayb ay ka ahaayeen maamulka degmada,kan gobolka, maamulka cisbitaalka waxaa ay kormeer ku soo mareen xaafadda Garsoor oo biyaha ugu badan ay fadhiyaan, waxaana kormeerkoodii ka dib kulan ay qabteen saraakiisha socdaalka waday kaga xog warameen baaxadda ay le’ektahay dhibaatada ka dhalan karta biyahaas haddii aan sida ugu dhakhsa badan wax looga qaban.
Ugu horayn waxaa kulanka ka hadlay Duqa degmada Gaalkacyo Col; Siciid Cabdi Faarax oo sheegay inay dadaal wadaan ka dawladda hoose ahaan balse ay awoodoodu ka weyntahay.
Gudoomiye ku xigeenka Mudug Farxaan Cali Xirsi ayaa isaguna dhankiisa tilmaamay in horay ay qiimayn ugu sameeyeen baaxada biyaha dhex fadhiya magaalada, maantana wafdi ballaaran arintaasi ay ugu kuur galeen.
Wasiirka Caafimaadka Puntland Cali C/laahi warsame ayaa xaalad khatara ku tilmaamay biyaha midab doorsoomay ee dhex fadhiya magaalada, wuxuuna baaq u diray maamulka,hay’adaha iyo qurba joogta Soomaaliyeed si arintaas khatarta leh wax looga qabto.
Maalinta Berri ah ayaa la filayaa inay magaalada ka dhacaan kulamo intan ka waaweyn oo arintaasi lagu gorfeeyo sidii wax looga qaban lahaa.